မိခင်များ nursing အစားအစာ / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
ရှာဖွေတွေ့ရှိ, ပျော်ရွှင်မှုများနှင့်အခက်အခဲများနှင့်ပြည့်ဝ၏မွေးဖွားပေးခြင်းပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးလ။ ကနျြးမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စများထောင်ပေါင်းများစွာ၏, အာဟာရနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်တစ်ချိန်တည်းမှာမေမေ, အမူအကျင့်နေဆဲဖြစ်သည်။ သူမသည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဘယ်လိုသူ့အဘို့အခြေအနေသစ်ထဲမှာပြုမူစကားကိုနားထောငျ။ ဒါကြောင့်ကလေးက၎င်းင်း၏ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရဆုံးဖြတ်သည်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပါဝါ၏နှိပ်ကိစ္စများတစ်ခုမှာ, ထိုမိနျးမဖြစ်လာသည်။ သငျသညျစားနိုင်သောအရာကို "၏ဆောင်ပုဒ် ...
အဘယ်အရာကိုပဌမလ၌တစ်ဦးသူနာပြုမိခင်ကိုစားနိုင်မလဲ? Read more »
Menu ကိုသူနာပြုမိခင်များ Komarovka အပေါ်လစဉ်စားပွဲပေါ်မှာ
မိခင်နှင့်ကလေး - တစ်ခုတည်းသက်ရှိ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုစားဆိုတဲ့အချက်ကို, ထို့နောက်ထိုသူငယ်၏ကိုယ်ထဲသို့ဝင်, ဒါကြောင့်အရေးပါထက်ပိုမိုအားဖြင့်အစားအစာကိုမှကုသသင့်ပါတယ်။ လကြာတဲ့အစားအစာစုစည်းဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ဘယ်အချိန်မှာအစားအသောက်များတွင်အတွက်ထုတ်ကုန်အသစ်တွေအုပ်ချုပ်? နိဒါနျးပိုငျးအများစုမှာသူနာပြု moms တူညီတဲ့အမှားခွင့်ပြုပါ - လွန်းအစာစားခြင်း ...
Menu ကိုသူနာပြုမိခင်များ Komarovka အပေါ်လစဉ်စားပွဲပေါ်မှာ Read more »